Education – SoShwe
4 weeks ago	Education, LifeStyle 0
ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်လျှောက်ပြီး အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါ အပြင်မှာပဲ လူချင်းတွေ့ပြီး အင်တာဗျူးလေ့ရှိပေမယ့် ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြောင်းလဲလာသည့် နေထိုင်မှုဘဝပုံစံအရ Work From Home လုပ်ရခြင်း၊ အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါ၊ အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါမှာ Zoom ဒါမှမဟုတ် Google Meet-up တစ်ခုခုကို အသုံးပြုခြင်းတို့ ပိုမိုတွင်ကျယ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အပြင်မှာအင်တာဗျူးသွားတွေ့တဲ့အခါ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်များကို ကြိုတင်လေ့လာခြင်း၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းတို့ကို ပြင်ဆင်သွားနိုင်ပေမယ့် Video Interview လုပ်တဲ့နေရာမှာ တော်တော်များများက အတွေ့အကြုံများများစားစား မရှိသေးတာကြောင့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များကို Soshwe ရဲ့ ပရိသတ်များအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ သင်က ကင်မရာကြောက်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊ စတိတ်စင်ကြောက်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် တကယ့် …
May 31, 2022	Education, Tech 0
Netflix ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ Reed Hastings နဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီး ပရဟိတဝါသနာရှင် Patty Quillin တို့နှစ်ဦးဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းနဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းတွေမှာ ပညာသင်ကြားဖို့ ပညာသင်စရိတ်မတတ်နိုင်တဲ့ လူမည်းကျောင်းသူ/ကျောင်းသားတွေအတွက် ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့စရိတ် ဒေါ်လာသန်း ၁၂၀ ကို လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ Netflix ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ Reed Hastings နဲ့ ချစ်ဇနီး Patty Quillin တို့ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Atlanta ပြည်နယ်ရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Spelman ကောလိပ်ကျောင်းနဲ့ Morehouse ကောလိပ်ကျောင်းတွေမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ လူမည်းကျောင်းသူ/ကျောင်းသားတွေအတွက် တက္ကသိုလ်ပညာသင်စရိတ်ကို လှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hastings ဟာ အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်က Peace Corps အဖွဲ့အစည်းမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့့ပြီး Swaziland …
May 27, 2022	Education 0
လက်ရှိအချိန်၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကြောင့် သင်တန်းအများစုကို ပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပေမယ့် အင်တာနက်ထွန်းကားလာသည့်ခေတ်၌ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပညာသင်ကြားရန်အတွက် ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲမျိုးတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပညာသင်ကြားရာ၌လည်း သိထားသင့်သည့်အချက်များ၊ သတိထားသင့်သည်များရှိသောကြောင့် အရေးကြီးဆုံးအချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ မိမိစိ်တ််ဝင်စားသည့်အရာနဲ့ ပတ်သက်သောသင်ရိုးကို ရှာဖွေပါ။ နာမည်ကောင်းရထားသည့် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို သွားရောက်ပြီး မိမိစိတ်ဝင်စားသည့် သင်ခန်းစာများ၊ သင်ယူသူများမှ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံပေးထားသည့် သင်ရိုးများကိုရှာဖွေပါ။ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပညာသင်ကြားမယ့်သူများအနေဖြင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ အသုံးပြုမည့် ဘာသာစကား၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုအတွက်ကြာချိန်နဲ့ မည်သည့်တက္ကသိုလ်က အဆိုပါသင်ရိုးကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည်ဆိုခြင်းကို ကြိုတင်သိရှိထားသင့်ပါတယ်။ အချို့သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၌ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအတွက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ကို ပြသထားသောကြောင့် မိမိနဲ့ကိုက်ညီသည့်သင်ရိုးများကို …
April 25, 2022	Education 0
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ တချို့သောအရာတွေဟာ ထူးခြားဆန်းပြားပြီး မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် ဖြစ်စေတဲ့အတွက် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်လို ဘယ်ပုံတွေကြောင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်လို့ ဆိုရတာလဲဆိုတာကို တစ်ချက်ခြင်းဆီဖော်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ သက်ရှိလူသားတွေရဲ့ အစာအိမ်ဟာ သင်တုန်းဓားတွေကိုတောင် ချေဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်တုန်းဓားကို အကြောင်းကံမလှလို့ မတော်တဆ မျိုချမိတယ်ဆိုရင်တောင် အရမ်းကြီးစိတ်မပူသင့်ကြောင်းကို သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးက အကြံပြုထားပါတယ်။ ၂။ လေဆာရောင်ခြည်ဟာ ရေထဲမှာဆိုရင် ရေသွားရာလမ်းကြောင်းအတိုင်း ပျံ့နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ၃။ ကမ္ဘာမြေပေါ်က လူသားတွေအသက်ရှုဖို့အတွက် အောက်စီဂျင်ပမာဏကို ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ ရေမှော်တွေ အစိမ်းရောင်အပင်တွေက ထုတ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ ပင်လယ်လိပ်လိုမျိုး ဆယ်လ်မွန်ငါးလိုမျိုး …
April 21, 2022	Education, LifeStyle 0
အလုပ်တစ်ခုရရှိဖို့အတွက် ပထမဦးဆုံးအင်တာဗျူးဆိုတဲ့ လူတွေ့စစ်ဆေးမေးမြန်းတာကို လူတိုင်း ကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ကို ရနိုင်၊ မရနိုင်ဆိုတာကလည်း အင်တာဗျူးမှာ မိမိအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သလဲ ? ? ? ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်သွားသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးမေးမြန်းသူနဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံချိန်မှာလည်း အကဲဖြတ်သူရဲ့ အထင်ကြီးလေးစားမှုကို ရရှိအောင် ပြုလုပ်ဖို့ကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ Soshwe က သူငယ်ချင်းတွေလည်း လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါကျရင် အင်တာဗျူးဆိုတဲ့ စစ်မြေပြင်ကြီးကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် အလုပ်အင်တာဗျူးတွေမှာ အမေးအများဆုံး မေးခွန်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် . . . ၁။ သင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ ? ? ? ဒါကတော့ …
April 19, 2022	Education 0
ပြီးခဲ့သည့် (၁၀) နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ စမတ်ဖုန်းများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနဲ့ Facebook၊ Instagram တို့ကဲ့သို့ ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူအရေအတွက်က အံ့မခန်း တိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်းရှိလူငယ်များအနေဖြင့်လည်း ဝါသနာအသစ်များ၊ စိတ်ဝင်စားမှုအသစ်များဖြင့် အရာရာကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြပြီး သမာရိုးကျစာအုပ်များ၊ ဂဏန်းပေါင်းစက်များထက် Programming များ၊ Systems Networking များ၊ Cloud Computing များကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ သို့ဖြစ်ရာနိုင်ငံအတွင်းရှိ IT ဘွဲ့ရများအတွက်လည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ပိုမိုပွင့်လန်းလာခဲ့သောကြောင့် IT ဘွဲ့ရများအတွက် သိမှတ်ဖွယ်ရာအဖြာဖြာကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ အထူးပြုဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း။ IT နည်းပညာရပ်က အင်မတန်မှကျယ်ပြန့်သည့် ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Software Programmer, Web Developer, Network …
April 12, 2022	Education 0
ကျွန်မတို့တွေဟာ နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ COVID-19 ရောဂါကို ခုခံကာကွယ်ရင်း အသက်ရှင်နေထိုင်သွားရမယ်ဆိုတာကို WHO က ကြေငြာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ လူသားအားလုံးဟာ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပညာရေးတွေကို ရပ်တန့်ထားလို့မဖြစ်ဘဲ တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အသိကို ရရှိလာကြပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဝေးလံခေါင်သီပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု မရရှိတဲ့ ဒေသတွေမှာ နေထိုင်နေရတဲ့ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားအချို့ဟာ ဘယ်လိုမျိုး ပညာရေးအခက်အခဲတွေကို ကြုံတွေ့နေရသလဲဆိုတာကို ဖော်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဒေသအချို့မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲ ဘာကြောင့်များ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ဒုတိယအများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်နေရတာလဲ? လို့ မေးခွန်းထုတ်လိုတဲ့ Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကိုတော့ “အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်တယ်။” လို့ …
အနာဂတ်ကမ္ဘာကြီးအတွက် အရေးပါလာမည့် Critical Feeling အကြောင်းသိကောင်းစရာ။
April 3, 2022	Education 0
ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်သည့်နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကျော်ကာလအတွင်း ပညာရေးဆိုင်ရာသီအိုရီသမားများက Critical Thinking ဟုခေါ်သည့် ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားရေးကို အထူးအလေးထား သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစွမ်းရည်က ရှင်းလင်းပြတ်သာမှု၊ တိကျသေချာမှု၊ ကျိုးကျောင်းဆီလျော်မှု၊ ခိုင်လုံသော သက်သေအထောက်အထားနဲ့ အကြောင်းပြချက်များ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်သည့် အသိဉာဏ်တန်ဖိုးများ၊ တရားမျှတမှုအစရှိသည်တို့ကို ချင့်ချိန်တွေးခေါ်နိုင်ရန် အရေးပါသည့် စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်မူ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက ထိုကဲ့သို့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားရေးအတွက် ကြိုးစားနေခြင်းက ၎င်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ကို တွန်းလှန်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးက အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Critical Thinking ရှိသူထက် Critical Feeling ရှိသူများက မကောင်းသည့်ခံစားချက်များကို ဖြတ်တောက်နိုင်ကြောင်း၊ အခြားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အပြောင်းအလဲများ၌ လိုက်လံစီးမျောနိုင်ကြောင်း နော်ဝေစိတ်ပညာရှင်ရီဘာက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနေ၍ များစွာဝေဖန်ပိုင်းခြားနေခြင်းက …
အလုပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်း ပြန်လည်မေးမြန်းသင့်သော မေးခွန်းများ။
March 30, 2022	Education, Other 0
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အလုပ်အတွက် အင်တာဗျူးသွားဖြေတဲ့အခါမှာ သင့်ကို အင်တာဗျူးပြုလုပ်တဲ့ အလုပ်ရှင် (သို့) အထက်လူကြီးကို မေးခွန်းတချို့ ပြန်မေးသင့်ပါတယ်။ ၁။ ဒီရာထူးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးသူမှာ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ ရှိသင့်ပါသလဲ ? အလုပ်စလျှောက်ကတည်းက Job Description မှာ ဒီရာထူးကို လျှောက်ဖို့အတွက် ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဖော်ပြထားပြီးသား ဖြစ်သော်လည်း အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ မေးခွန်းကို မေးခြင်းအားဖြင့် အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အချိန်မှာ ဒီရာထူးက အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသလား ? ဒီမေးခွန်းကိုမေးခြင်းအားဖြင့် သင်ဟာ ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ ရေရှည်လက်တွဲဖို့အတွက် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကို အလုပ်ရှင်တွေက အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ၃။ ဒီကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ သင့်ကိုအပျော်ရွှင်ဆုံး ဖြစ်စေတဲ့ …
အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်မှုအတွက် မဖြစ်မနေ လေ့လာထားသင့်တဲ့ ကောလိပ်သင်တန်းများ။
မိမိရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကို အဆင့်မြှင့်ချင်သူတွေအနေနဲ့ လက်ရှိအလုပ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို သင်ယူတတ်မြောက်ထားဖို့က အတော်လေး အရေးကြီးပါတယ်။ Velvet Jobs အလုပ်အကိုင် အကြံပေးကုမ္ပဏီက Joe Flanagan က “ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တစ်ခုကို သင်ယူခြင်းဟာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုကို တိုးတက်စေပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကို ဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာကို နားလည်သိရှိထားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အကယ်၍ စာဖတ်သူဟာ အလယ်တန်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင် ဒါမှမဟုတ် အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်မှာ နေရာရလိုသူဖြစ်ပါက လေ့လာသင်ယူထားသင့်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ: Programming ကို သင်ယူလေ့လာခြင်း။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမှာ အလုပ်မလုပ်တာကြောင့် …